Wikimidiya Daivasiti Konfirensi 2017/Egonyemaka - Meta
Wikimidiya Daivasiti Konfirensi 2017/Egonyemaka
Inye ndi chọrọ isonye na nzụkọ a egonyemaka ga dabere na ihe onye ahụ denyere na akwụkwọ ndenye aha banyere ọrụ na nka,ebụmnobi ya inyere aka na oganirụ atụmatụ nzụkọ a na mgbe ọzọ. Ndụmọdụ a na enye ndi ọchọ egonyemaka bụ na ha gaa eba ambasadọs lee oke na ọrụ ndi ambasadọ maka echiche otụ ha ga esi etinye aka na atụmatụ nzụkọ a.
E nwere ike inye ndi ọzọ ha na Wikimidiya nyere mmekọ egonyemaka, imaatụ bụ ego ụgbọ. Ọ bụ oke na ọrụ ndi nile n'achọ isonye na ọgbakọ a ikwado onwe ha na ihe banyere ụgbọ, ya na ihụ na akwụkwọ ichọ egonyemaka ha gara nke ọma.
Ndi na achọ isonye na ọgbakọ a nyere ike idenye akwụkwọ egonyemaka otụ n'ime ụdi atọ.
(1) Egonyemaka isonye na ọgbakọ a. Ụdi egonyemaka nke a gụnyere ego ọgbakọ, tinye kwa otụ ọgbakọ nri abali, nri ehihie abụọ,"fika" abụọ bụrụ ibụ na abụọ di ntakiri. Ọnụ ogụgụ ole egonyemaka nke a ga banyere: Iri abụọ na ise (25)
(2) Egonyemaka nke isonye na ọgbakọ na ụlọ obibi. Egonyemaka nke a gụnyere nani ndi chọrọ isonye si obodo Sụwideni na Yụropu m'obụ ndi Òtù ha kwụrụ ụgwọ ụgbọ isonye. Egonyemaka nke a gụnyere ụgwọ ọgbakọ, ụlo ekere ndi mmadu na ebe nzụkọ a nnọ. Mmadu ole egonyemaka nke a ga banyere:Iri abụọ (20)
(3) Egonyemaka maka isonye n'ọgbakọ, ụlo ya na ego ụgbọ. Ego ụgbọ a ga enye ndi ahoputara bụ nani nari abụọ, iri asatọ na asaa (287)USD, ọ bụ ego nyemaka maka ụgbọ (anyi na atụ anya na ọnyinye ego ka ga abia). Egonyemaka nke a ga banyere mmadụ:Iri atọ na ise (30)
Ụbọchi di mkpa
Ụbọchi iri abụọ na ọnwa asatọ: Mmechi nabata akwụkwọ egonyemaka
Ụbọchi iri abụọ na otụ rụo iri abụọ na asaa na ọnwa asatọ:Nhọpụta
ndi a ga enye egonyemaka.
Site na ụbọchi iri atọ na otụ: Igwa ndi a họpụtara.
Ntozụ itinye akwụkwọ
Anyi n'achọ ndi:
Ndi ga esonye na arụmarụ Wikimidya dika ndi ọrụ m'ọbụ omenaobioma.
Ga eke ihe ọgwụgwa banyere ndiche na obodo ha na arụkọ ọrụ, imata nsogbu ma chepụta otu esi emezi nsogbua.
Ndi chọrọ igbakọta aka chepụta otu a ga esi akwado ndiche na Wikimedia.
Ndi si aburu na amụmihe di iche iche. Anyi ga anabata ndi nwere amụmihe pụrụ iche, m'ọbụ onye ga etinye ihe bara uru na
Inye egonyemaka ga adabere na ihe ndi a:
Mmetụta na Nzụkọ Wikimidiya
Immatụ mmetụta na nzụkọ Wikimidya:
1. Nkwado nka m'ọbụ mmụba mmata arụmarụ Wikimidiya na otu
ndi n'anọchi anya ha.(dika ihazi nzụkọ ndi okenye idezi ọrụ
2. Mmata oghere di na etiti ikwado ije Wikimidiya.(inyocha
oghere nọ na etiti okike na ọrụ Wikimidiya, mmepe ihe
mmekọrita mmadụ na ibe a n'akpọ "Soshal midiya" inyere ndi
LGBT + Wikimidiya aka na ihe gbasara mmekọrita mmadụ na
3. Mmepe ụzọ otu ọrụ Wikimidiya ga esi agbasa rụo ndi na enweghi
ndi nnochi anya(irụ ọrụ na Wikipediya zero ikwenye ọrụ
wikimidiya, ihụ maka ọganirụ Kiwix ikwado ọrụ wikimidiya nke a
n'akpọ offline Wikipedia)
Mmekọta ni ije a
Imatụ mmekọta nime ije:
Onye n'ewerela ọnọdụ onye isi ikwado nsonye na ọrụ Wikimidiya (dika ibido ọrụ wiki iwete ihe mmụta gbasara nka obodo India.)
Onye n'eburula n'isi ihe gbasara irụkọ ọrụ na otu ebe ndi na n'enweghi ndi nọchite dika onye isi mere k'amata ndi otu na ọrụ Wikimidiya (onye rụrụ ọrụ mgbochi iyi egwu,dere ndi nta akikọ akwụkwọ gbasara ndi Wikimidiya nwere mkpa pụrụiche)
Onye n'enyeere la aka iwete mgbanwe omenala ni ime inabata ma mara ọrụ Wikimidiya na otu ndi a n'amaghi(na arụọ la ọrụ ihazi iwụ ga ahụta na anụrụ olu ndi n'enweghi ndi nnọchite na Wikimidiya, onye kwalitere ndiche na atụmatụ ije Wikimidiya).
Onye n'agbala mbọ na iweta mmekọrita n'etiti ije Wikimidiya na ndi otu ọzọ nwere nghota ije Wikimidiya na ihe ndiche.
Ndi n'achọ isonye ga agbali chepụta ihe ndi ọzọ ha emela bara ụrụ na ije ndiche ndi wikimidiya ma depụtaya otu ha si chọ. Anyi na achọ ahụmahụ diche n'ọnọdụ ga pụta ihe, ga a bụ ihe ụche na nzụko a. atụ:Wikimidiya Daivasiti Konfirensi 2017
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikimedia_Diversity_Conference_2017/Scholarships/ig&oldid=17162774"